Mbara Igwe - Meteorology na Net | Network Meteorology
Nnyocha mbara igwe Ọ bụ isiokwu na-atọ ụtọ n'ezie na-anaghị akwụsị ịtụ anyị n'anya kwa ụbọchị. Ọ bụ sayensị ka a na-agụ gbasara kpakpando, mbara ala na ụwa niile. Ihe omuma ya putara "Stargazing." A na-ahụ ihe ndị a dị na mbara igwe kwa ụbọchị site na mbara igwe site na ndị na-enyocha mbara igwe na ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ ịkọwa ntọala nke eluigwe na ala na ọrụ ya.
Enwere otutu usoro nlebara anya iji mara ọnọdụ, ngwakọta na mmegharị nke ihe ndị dị na mbara igwe. Imirikiti ihe ọmụmụ a na-eme bụ maka otu ha nwere ike isi metụta ụwa anyị.
Oge ochie kacha ochie kọwapụtara akụkọ mbara igwe na ajụjụ ndị ọzọ metụtara akụkọ ifo, chi dị iche iche na nkwenkwe okpukpe. Nke a bụ n'ihi ogologo njem ndị e mere. N'ihi ọganihu nke nkà na ụzụ na ihe ọmụma, amatara na ụwa bụ otu mbara igwe ọzọ na anyị abụghị etiti nke eluigwe na ala. Eluigwe na ụwa enweghi ngwụcha ma nwee ụyọkọ kpakpando, anyanwụ, kpakpando, mbara ala ndị ọzọ, ọnwa, meteorites, uzuzu, ụzọ ụkwụ, na ikuku.
Telescope nyere aka na Galileo Ọ bụ otu n'ime akụrụngwa kachasị baa uru na Astronomy. Taa, na ọganihu nke teknụzụ, enwere ike ịza azịza doro anya banyere mmalite nke ụwa na afọ nke ihe ndị dị na mbara igwe. Ndị na-enyocha mbara igwe etinyewo ihe ọmụma bara uru na sayensị nke ụwa anyị ma nọgide na-eji otu usoro nyocha ahụ.
Ha n'ozuzu ha na-enweta enyemaka ego site na steeti, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ịzụrụ na mepụta ngwa ngwa na-arịwanye elu na ịkwụ ụgwọ na imewe nke ụlọ ọrụ nyocha dị mgbagwoju anya na-akwụ ụgwọ ego ha dị oke ọnụ. NASA.
Na udi a ị nwere ike ịnụ ụtọ ma mụta banyere eluigwe na ụwa na mmalite ya. Site na ọrụ nke usoro mbara igwe, na njirimara nke mbara ala niile, na-agabiga ụyọkọ kpakpando kachasị mkpa ma na-ezere oghere ojii. Echefula anwansi nke Astronomy ma sonye na ihe omuma gbasara mbara igwe!
Onyonyo nke oghere ojii na ụyọkọ kpakpando anyị
por Portillo nke German eme 12 mins .
Afọ atọ gara aga, obodo sayensị nke Event Horizon Telescope (EHT) tụrụ ụwa anya na foto mbụ nke…
Kedu ka oghere ojii si ada?
por Portillo nke German eme Awa 4 .
Ejikọtara oghere ojii dị n'etiti ụyọkọ ụyọkọ kpakpando Perseus na ụda kemgbe 2003…
por Portillo nke German eme Ụbọchị 6 .
Stephen Hawking, Yuri Milner na Mark Zuckerberg na-eduzi otu bọọdụ ndị isi maka atụmatụ ọhụrụ akpọrọ Breakthrough Starshot, onye ...
kedu ihe bụ orbit
Mgbe anyị na-ekwu maka mbara igwe, usoro mbara igwe na mbara ala, anyị na-ekwukarị banyere orbit. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile…
gini bu uwa
Anyị na-ebi na mbara ala nke dị n'ime usoro mbara igwe, nke n'aka nke ya bụ ndị ọzọ gbara ya gburugburu ...
ka teliskop si arụ ọrụ
por Portillo nke German eme 3 izu .
Igwe teliskop bụ ihe e mepụtara nke gbanwere ihe ọmụma nke mbara igwe n'akụkọ ihe mere eme nile. Iji…
Gịnị mere anyị ji ahụ otu akụkụ nke ọnwa mgbe niile?
Anyị niile maara na ọnwa na-egosi anyị otu ihu mgbe niile, ya bụ, site na ụwa anyị enweghị ike…
por Portillo nke German eme Ọnwa 4 .
Anyị maara na ụwa anyị nwere ọtụtụ ụdị ngagharị usoro anyanwụ. Otu n'ime ihe kachasị mkpa na nke…
N'abalị mmiri na mmalite oge okpomọkụ, onye ọ bụla na-ekiri ihe na mpaghara ugwu ụwa ga-ahụ ihe ...
Oké ifufe nke anyanwụ
por Portillo nke German eme Ọnwa 5 .
Oké ifufe nke anyanwụ bụ ihe na-emekarị na anyanwụ site n'oge ruo n'oge. Ha na-abụkarị oge oge na ...
Anyị maara na usoro mbara igwe anaghị akwụsị ozugbo ozugbo anyị gafere gburugburu mbara ala Pluto….
Mmeghari ụwa: ntụgharị, ntụgharị, precession na nutation
Kalenda ọnwa 2018